Tsy hahomby izany…… indray mandeha isan-kerinandro dia mahazo mailaka tsara ao anaty boaty misy ahy misy soratra hoe FNAME na collage misy sary tsy misy soratra hafa. Na azoko amin'ny ahy ilay izy fampisehoana retina miaraka amin'ny sary manjavozavo. Na manokatra azy amin'ny findaiko aho ary tsy afaka mamaky azy satria ny mailaka finday tsy nandray andraikitra.
Ny lisitra fizahana dia mandalo anao amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka, mifanentana amin'ny mpanjifa mailaka, topi-maso ao anaty boaty, ary topy maso mialoha mba hijerena tsara ny zava-drehetra ary mandeha tsara alohan'ny andefasanao! Raha tianao dia afaka manao izany ianao misintona kinova fanontana apetraka eo ambonin'ny latabatrao eo akaikinao!